Qeybta:Aaladda38 min akhris
Faa'iido-darrooyinka La-waafajinaya Covid-19 oo leh Hal-abuurka iyo adkeysiga
Waqtiyada aan la hubin, waxay xitaa noqotaa mid ka sii muhiimsan in la raadsado dhibco dhalaalaya. McKnight, waxaan ku aragnaa dhibco ifaya jaalayaasheena sharafta leh ee ka shaqeeya inay horumariyaan mustaqbal ka sii caddaalad, hal abuur, iyo mustaqbal badan. Xaaladaha khatarta leh ee masiibadaani, waxay sii wadaan helitaanka dariiqooyinka kahortagga iyo saamaynta leh ee loogu adeego bulshooyinkayaga. Hoos udhacyada hal-abuurka iyo falalka midnimada aadanaha ayaa ina dhiirrigeliya.
Soosaarka fiidiyowga waxaa sameeyay Molly Miles, Digital Storyteller
Waxaan u dabaaldegnaa ururo badan oo deeq bixiyayaal ah oo la jaan qaadaya barnaamijka 'Covid-19' ee boggan iyo taxanaha warbaahinta bulshada waxaan ugu yeeraynaa #BrightSpot. Naga soo raac Facebook, Twitter, iyo LinkedIn, oo nagala qaybso wadaagida wixii dhibic dhalaalaya ee aad soo aragto. Maaddaama aan la qabsaneyno midka cusub, waxaan dhammaanteen u baahanahay rajo dheeri ah oo ku soo qulqulaya akhbaartayada wararka.
Xusuusin: Waxaan cusbooneysiin doonaa boggan markii aan baranayno dhacdooyinka iyo fikradaha cusub. Maaddaama tani ay tahay xaalad firfircoon, qaar ka mid ah jagooyinka hore ayaa dhici doona. Waxaan u haynay boggan inay ku soo qabtaan dadaallada hal-abuurka badan ee soo ifbaxay xilligan gaarka ah ee taariikhda.
Awood siinta reer Minnesota ee cusub
CAPI USA ayaa isticmaalaya ardayadooda cuntada waxayna soosaaraan munaasabadaha qaybinta si kor loogu qaado tirakoobka 2020 laguna dhiirigaliyo waxbarashada codbixiyaasha, diiwaangalinta, iyo abaabulka.
COPAL waxay martigalineysaa 24 munaasabado "COPAL en la Comunidad" oo ka dhaca guud ahaan gobolka Minnesota iyadoo laga hadlayo doorashada 2020 si loogu mashquuliyo cod bixiyeyaasha Latinx loona bixiyo Covid, tirakoobka, iyo ilaha doorashada.
Si loo taageero ganacsiyada muhaajiriinta maxalliga ah xilli baahi weyn loo qabo, AEDS waxay kuu keenaysaa Little Africa Fest qolkaaga fadhiga iyadoo afar maalmood internetka looga dabaal dagayo cuntada, muusiga, iyo farshaxanka.
Ardayda Andean Way Ku Xidhan Yihiin
Seeds iyo Iskuul
Caalimka Seeds iyo Iskuul Mashruuca ka socda jasiiradaha dhexe ee dalka Peru wuxuu iibsaday raadiyeyaal loogu talagalay ardayda aan lahayn teknolojiyad ay ku galaan fasalada guriga.
United Renters for Justice / Inquilinxs Unidxs Por Justicia waxay ka caawineysaa xubnaha bulshada inay la xiriiraan deriska isla markaana ay qaadaan tallaabo wada jir ah haddii mid ka mid ah uusan awoodin inuu bixiyo kirada inta lagu jiro cudurka.
Rabitaanka Farshaxaniistayaasha Kala Soco Shabakadda
Si looga caawiyo kala-duwanaanshaha wada-hadalka dhaqanka iyo in loo maro dariiqa codka cusub ee la xiriira sameynta farshaxanka dijitaalka ah, Horumarka Waxay leedahay tababar toos ah oo bilaash ah oo loogu talagalay sawir qaadayaasha cusub iyo kuwa soo koraya, filim sameeyayaasha, iyo fannaaniinta.
Cilmiga Borotiinka Qoto-dheer
Loren Looger, Ph.D., McKnight Innosno Teknolojiyada xubin guddiga abaalmarinta Neuroscience, ayaa adeegsaneysa aqoontiisa qoto dheer ee borotiinnada si ay ugu shaqeeyaan gaar ahaan sameynta tijaabooyinka Covid-19.
Raadinta Qowmiyadaha Mareykanka
Masraxa Penumbra hadda waxay ku bixisaa Aqoon-isweydaarsigeeda Race internetka. Aqoon isweydaarsiga ayaa adeegsanaya fududeynta khubarada, monologues art, iyo masraxa si ay ugu hagaan sahaminta xoogga leh ee qowmiyadaha Mareykanka.
Faa'iido-Hel Hel Gargaar
Dhiirigalin Dakhliga Kale
Ma u baahan tahay caawimaad dib loogu eegayo socodka lacagtaada, ama talo ku saabsan xubin ka noqoshada guddiga? Propel waxay siisaa tabar-darrooyin taageero farsamo oo bilaash ah xagga maaliyadda, istiraatiijiyadda, iyo maamulka.
Cuntooyinka loogu talagalay Caafimaadka
Astaan mahadnaq ah Xarunta Horumarinta Deriska iyo Suuqa Midtown Global abaabulay Cunno loogu talo galay Caafimaadka, iyadoo la siinayo 50+ cunno maalintii oo loogu tala galay shaqaalaha safka hore ee Isbitaalka Abbott.
Dhallinta waxay iskaashi la sameysay hay’adda Venn Foundation si ay u siiso laptops bilaash ah ama qiimo jaban qoysaska danyarta ah, u ogolaanaya ardayda oo dhan inay si buuxda uga qeybqaataan barashada masaafada.
Kheyraadka loogu talagalay Ganacsiyada ay leedahay shirkadda BIPOC
MEDA waxay ka caawineysaa ganacsatada ay leedahay shirkadda 'BIPOC' inay badbaadaan oo ay barwaaqoobaan inta lagu gudajiro COVID-19 iyadoo bixisa la-talin ganacsi, marin u hel raasamaal, iyo tilmaamo-tallaabo tallaabo tallaabo ah ee lagu safrayo masiibada.
Goynta Quinoa ee karantiil
Markii COVID-19 uu ku dhuftay Bolivia, Dr. Alejandro Bonifacio wuxuu u dhaqaaqay shaybaarkiisa si uu u ilaaliyo tijaabooyin. Isaga iyo kooxdiisu waxay goosanayaan quinoa si ay u taageeraan tobanaan sano oo taranka beeraha iyo shaqada ilaalinta noolaha.
Magdhowga Bogagga COVID
Xilliga guga ballaariyey Sanduuqa Gargaarka Degdegga ah ee Shaqsiyeed kaas oo codsadayaasha u qalma ay heli karaan illaa $500 si ay ugu magdhabaan shaqada la kansalay. Barnaamijyada waxaa lagu heli karaa Ingiriis, Soomaali, iyo Hmong.
Daboolista Baahiyaha Bulshada
MCF iyo SPMC
Golaha Minnesota ee aasaaska iyo Saint Paul & Minnesota Foundation waxay abuurtay Sanduuqa Soo-kabashada Musiibada ee loogu talagalay coronavirus. Ilaa hadda 50 hay'adaha samafalka ah ayaa ku deeqay $11M.
Baradhadu Khudaarta Peruvian ee Suuqa
Ilaaliyeyaasha Dheriga Dhaladka ah
COVID-19 ayaa xidhay suuqyadii beeralayda iyo gaadiidkii dadweynaha ee Peru. Shabakada Beeraleyda ayaa gacan ka geysaneysa diyaarinta gaadiid qaas ah iyo adeegsiga aalado dijital ah si baradhada si toos ah loogu gaarsiiyo macaamiisha Lima.
Dhallinta iyo Qoysasku Waa Bixiyeen
Sanneh Foundation u qoondeeyay xubnaha shaqaalaha si ay u taageeraan gargaarka degdegga ah ee cuntada ee qoysaska, iyagoo siiya gurmad ballaaran oo cunto ah iyo u qeybinta shelfiska cuntada iyo guryaha.
Yaree Isticmaalka Tamarta Guriga
Xarunta Tamarta iyo Deegaanka waxay hadda bixisaa booqashooyinka guriga ee Tamarta Tamarta ee 'Home Energy Squad' si looga caawiyo macaamiisha sidii ay ku heli lahaayeen keydkooda tamarta ugu weyn. Booqashada waxaa lagu sameeyaa khadka tooska ah wax lacag ahna lama bixinayo.
Daryeel iyo naxariis ayaa sii socota
Aasaaska Wilder Kooxda da'da ah ee caafimaadka leh ayaa gudbinaya raashin, waxay wicitaano wacnaanayaan, waxayna bixinayaan isku xirnaanshaha aadanaha ee aad loogu baahan yahay in kabadan 500 oo waayeel ah iyo daryeel bixiyayaal.
COVID-19 Imtixaannada horumarinta
Feng Zhang, Ph.D., oo ah McKnight Neuroscience Tech Awardee, iyo kooxdiisu waxay soo saareen hal saac, oo ah tijaabada guriga ee Covid-19 iyadoo ujeedadu tahay in goor hore la ogaado oo la xakameeyo.
Hennepin Theatre Trust waxay la shaqeysay fanaaniinta si ay u soo gudbiyaan farriimaha baaldiyeed ee rajo iyo mahadnaq leh kuwa ka shaqeeya safka hore inta lagu gudajiro coronavirus. #ArtConnectsUs
Kobcinta Filim-sameeyayaal Madax-bannaan
My Filimka Waqooyi
Ma waxaad tahay qoraal-gacmeed qoraal ah ama soo-saare filim? My Filimka Waqooyi waxay u guureen fasalkooda guga qadka khadka tooska ah waxayna soo bandhigayaan heerarkooda ugu hooseeya weligood!
Chronicling MN ee Mareykanka Cusub
Baro sida Covid-19 ay u saamayneyso soogalootiga iyo qaxootiga ku nool Minnesota - laga bilaabo jawaabta tirakoobka ilaa socodka masaafada-aqriska Sahan Journal.
Nala Soo Booqo Fudud
Meelaha Matxafka Farshaxanka
Meelaha Matxafka Farshaxanka ayaa la wadaagaya barnaamijyada iyo macluumaadka ilmaaha ah ee da 'walba! Laga soo bilaabo fasallo toos ah ilaa laylisyo maskaxeed, xarun sameynta farshaxan iyo mahadcelin farshaxan.
Buugga Buuggaagta ee Virtual
Xarunta Qoraalka Buuggaagta ah
The Xarunta Qoraalka Buuggaagta ah wuxuu ku socday si toos ah barnaamijka '#WordPlay', oo ah riwaayad buugaagta onlaynka ah. Ku biir in ka badan 100 qoraa, gabayaayaal, iyo gabayayaal heeso ah oo loogu talagalay akhriska iyo wadahadalka.
Su'aalahaaga waa laga Jawaabay
TPT waxay leedahay caynsanaanta 'Covid-19' iyo kheyraadka kaa caawinaya ilaalinta naftaada, qoyskaaga iyo bulshadaada. Kheyraadka waxaa laga heli karaa Hmong, Isbaanish, iyo Soomaali.
Hoyga M @
Ku dhawaad baar sahaminta Matxafka Minnesota ee farshaxanka Mareykanka, la falgal farshaxanka qoyska ahaan, oo sahamiso ilo la xiriira farshaxanka iyo farshaxanada aragtida!
Sheekooyinka Maalintii Dhulka Slam
Cimilada Cimilada: Hantida Xayawaanka ee Will Steger ayaa lagu sharfayaa sanadguurada 50aad ee Maalinta Dhulka (4/22) oo ah maalin bulshada iyo dhijitaalka.
Abuuritaanka Fursad loogu talagalay Fannaaniinta Tiyaatarka
Rugta Ciyaaraha ' waxay qaadday ficil si loogu abuuro durdurro dakhli farshaxan-yahanada tiyaatarka shaqo-laaweyaasha ah isla markaana ay bixiso xiriir inta lagu gudajiro Covid-19 oo leh xilligi guga 2020.
Ilaalinta kuwa nugul
Sadaqada Katooliga ee Mataanaha ah Magaalooyinka mataanaha ah
Sadaqada Katooliga ee Mataanaha ah Magaalooyinka mataanaha ah waxay ka caawineysaa dadka hoy la’aanta ah ee reer Minnesota inay u guuraan hoteellada. Kulligeen waxaan si wanaagsan usocdaa markaan difaacno kuwa ugu nugul, sida dadka kale ee reer Minnesota ee aan haysan guri.
Dareen Awoodda Muusikada
The Minnesota Orchestra ayaa ku martigelinaya waxqabadka guriga halkaas oo aad ku arki doonto fannaaniin orchestra u tababaran, fulinaya oo sii wadaya inay muusikada toos uga wadaagaan guryahooda.
Alliance of Minnesota (BikeMN) waxay haysataa hangouts onlayn ah si ay naga caawiso inaan isku xirnaano. La soco dhacdooyinka ugu dambeeyay oo u sheeg mawduucyada laba-giraangiraha leh oo aad jeclaan lahayd inaad ka hadasho.
Fasalada qoob-ka-ciyaarka qolkaaga jiifka
TU qoobka waxay siineysaa fasalo qoob-ka-ciyaaraya oo furan oo ay ku fashaan farshaxannadooda waxbarista illaa Juun 12. Fiiri jadwalkooda, fasal ka qaad, oo ku taagee dadaalkooda haddii aad awoodid.
Hadiyado tayo leh iyo Alaab ay weheliso
Horta dadka asaliga ah: Dukaanka Farshaxanka & Hadiyadaha
The Ururka Hindida Guriyeynta Hindiya si dhakhso leh u bilaabay dukaan internetka ah si loo hubiyo in fanaaniinta asaliga ah & ganacsatada ay sii wadi karaan iibinta alaabadooda.
Awooda Dalka Hindiya
NDN wuxuu taageerayaa 80 wada-hawlgalayaal ah oo ka kala tirsan 19 gobol oo abaalmarin ka badan $2.3 milyan oo ku baahsan waddanka Hindiya oo dhan ururada, Qabiilooyinka, iyo shakhsiyaadka bixiya adeegyada kaladuwanaanshaha waqtigaan.
Kheyraadka Caafimaadka Maskaxda ee Luqadaha-badan
FARSAMADA garanayaa in dareennada taban ay weheli karaan go'doomin, sidaa darteed xirfadyaqaannadooda caafimaadka maskaxda waxay ku abuureen fiidiyowyo Isbaanish iyo Ingiriis si looga caawiyo yareynta welwelka.
CUB Minnesota & Tamarta Fresh
Golaha Adeegga Muwaadiniinta (CUB) ee Minnesota iyo Tamarta Cusub waxaad weydiisaneysaa adeegyada MN inay macaamiisha sii jeediyaan oo ay la wadaagaan kuwa adeegsiga ka joojinaya kala go'ida.
Taageeridda Suugaanta Madaxa-bannaan
Press House waxay bilaabeen Mashruuca Qoraayaasha Kafeega ee loo yaqaan 'House House Writrs Project' si ay u xilsaartaan shaqooyin asalka ah, shaqooyin gaagaaban oo ka socda farshaxan yahano dakhli ku lumiyay COVID-19.
Udirista Barashada Fogaanta
Barayaasha sareeya Waxay soo uruurisay liis ilo ah oo loogu talagalay macallimiinta, ardayda, iyo waalidiinta si loo helo qorshayaasha casharka, nashaadaadka, iyo xitaa qaar ka mid ah xulashooyinka khadka tooska ah!
Qoob ka ciyaarka Hindida casriga ah
Ananya Tance Theater, tiyaatarka qoob-ka-ciyaarka Hindiya ee casriga ah, ayaa sameeyey fiidiyowyo waxqabadka iyo casharo laga heli karo khadka tooska ah illaa dhamaadka dhammaadka joogitaanka Guddoomiye Walz ee guriga.
Shaqaalaha Daryeelka Caafimaadka ee Gawaarida Naafada
Shaqaalaha daryeelka caafimaadku waxay baaskiil wadis bilaash ah ku heli karaan muddo 30 maalmood ah Nice Ride MN. Ururada daryeelka caafimaadku waxay iska qori karaan shaqaalahooda si ay u helaan safarada 60-daqiiqo aan xadidneyn.
Farshaxanada 'improv Art' Jam
Tijaabinta Masraxa Wareega wuxuu ku socdaalaa barnaamijka 'improv jams' ee Facebook maalin walba Khamiista saacadu markay tahay 7:30 pm Jams waxaa ku jira diirimaad ku saleysan dhaqdhaqaaqa iyo duruusta miniv oo leh mowduucyo kala duwan todobaad kasta
Guuritaanka Aasiyaanka Tiyaatarka Mareykanka ee tooska ah
Masraxa Mu waxay martigelineysaa aqriska miiska sawirka bilaashka ah iyo qulqulka tooska ah ee fanaaniinta iyo taageerayaasha si ay ugala hadlaan farshaxanka iyo arrimaha muhiimka u ah iyaga.
The Isbahaysiga hogaamiyayaasha Asian Aasiya wuxuu ka soo horjeedaa takoorida iyo rabshadaha ka soo jeeda Aasiya wuxuuna kor u qaadaa sheekooyinka hodanka ah iyo kuwa kala jaadjaadka ah ee bulshada reer Asia ee Minnesota.